बली दिने प्रथा ठीक कि बेठीक ?
नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदा पूजापाठ लगाउने, साइत हेराउने र कालोबोको काटेर प्रधानमन्त्री निवास छिर्ने प्रचलन पुरानै हो । यसबाहेक पनि पर्व पर्वमा बोको बली दिने, विशेष पूजा लगाउने गरिन्छ । जब कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । सबै हिन्दु परम्परामा चल्ने अनि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेर कसलाई खुशी पारिएको हो ?
पाकिस्तान दक्षिण एसियाको मुस्लिम राष्ट्र । पाकिस्तानको सत्ता परिवर्तनका बेलामा अथवा इदमा बकरी कुर्वान गर्ने चलन छ । मुसर्रफका पालामा जति कालो बोको कुर्वान कहिले पनि भएन भनिन्छ । बली दिने परम्परा सफलताका लागि पनि हो । आफ्ना आराध्य प्रभू खुशी पार्ने प्रचलन रहेको छ ।
संस्कार, प्रचलन, परम्पराको सम्मान हरेक देशमा हुने गरेको छ । तर बुझ्न नसकिने कुरो के हो भने पशुपन्छीको अधिकारका लागि आन्दोलित हुनेहरू पनि छन् । गढी माईको मेला होस् कि इन्द्रजात्रा, वडादशैं होस् कि कोतपूजा, फलफूल र नरिवलको पूजाभन्दा पनि बलीकै महत्व अध्यापि छ । बली चढाएर आत्मशान्ति हुने र देवी खुशी हुन्छन् भन्ने मान्छेभित्रको विश्वास डगमगाएको छैन । विश्वास बढ्दो छ । संविधानमा हिन्दु धर्म नासियो होला, व्यवहारमा, विश्वासमा छ ।
अमेरिकामा पनि टर्की चराको बली दिइन्छ । टर्की चराको मासु भएन भने अमेरिकाको थ्याङ्स् गिभिङ भोजको आयोजना नै पूर्ण मानिदैन । यो भोजका अवसरमा करोडौं टर्की चराको मासु खपत हुन्छ । अधिकारकर्मी सबैभन्दा बढी अमेरिकामै छन्, अन्य मुलुकमा पनि छन्, कसैले अमेरिकाको यो भोज र भोजनबारे पशुपक्षी अधिकारका कुरा उठाउँदैनन् । यस्ता अधिकारकर्मीहरूको बोलवाला नेपालजस्ता अविकसित मुलुकमा बढी हुनेगर्छ । विदेशी डलरको खेती जो यस्ता मुलुकहरूमा बढी हुनेगर्छ । जुन देशमा मान्छेको मूल्य पशुपक्षीभन्दा कम छ, त्यो देशमा अधिकारका कुरा गरेर के हुन्छ ? लुट्ने लुटिरहेका छन्, मर्ने मरिरहेका छन्, जुन देशमा अक्सिजनधरि नपाएर मान्छे मरे, त्यो देशमा पशुपक्षीका अधिकारका सवाल ठूलो मुद्दा बनेको छ । प्रश्न यत्ति हो कि पशुपक्षीको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार, सुस्वास्थ्य र सुरक्षाको अधिकार, समानताको अधिकारबारे किन अधिकारकर्मीहरूको घोक्रो सुकेर गएको होला ?
र, दलित महिलालाई बधाई
दलित महिला कोटाबाट पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर बन्न सफल डा.अमृता रसाइली (विश्वकर्मा) लाई हार्दिक बधाई । संविधानले दलित भनेर लेखिदिएपछि यस्तो समाचार पनि लेख्नेदिन आयो । जातीय समानता कायम भएको भए, समानता रहेको भए महिला कहाँ कम छन् र ? मौका पाउनुपर्छ, महिलाले पुरूषको भन्दा राम्रो काम गर्छन् ।